स्वास्थ्य मन्त्रालयको कल सेन्टरमा अझै आउँछन् सयौं फोन – Health Post Nepal
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कल सेन्टरमा अझै आउँछन् सयौं फोन
२०७८ चैत ५ गते ११:२५
काठमाडौं–देशभर कोरोना संक्रमणको दर मत्थर भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दैनिक संक्रमितको संख्या ५१ छ। बिहीबार यो संख्या घटेर २७ भएको थियो। संक्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पनि खुला भइसकेका छन्। तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कल सेन्टरमा फोन आउने क्रममा कमी आएको छैन।
कल सेन्टरमा बिहीबार ३६४ र शुक्रबार ३३८ कल आएका थिए। कोरोना संक्रमणदेखिएलगत्तै सर्वसाधारणलाई कोरोनाबारे सचेतना जगाउन र यसको उपचार सेवाबारे जानकारी दिन स्थापना गरिएको कल सेन्टरमा पछिल्लो समय अन्य स्वास्थ्यसेवाबारे जानकारी लिन पनि फोन आउने गरेको छ।
मन्त्रालयले ११३३ र १११५ गरी दुई वटा नम्बर उपलब्ध गराएको छ। जसमध्ये ११३३ नम्बर २४ सै घण्टा खुल्ला हुन्छ भने १११५ नम्बर बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सञ्चालित हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार स्थापनाको सुरुमा सयौै मानिसले कल सेन्टरबाट सूचना लिने गरेका थिए। जसमध्ये अधिकांस कल कोरोनाका बारेमा जानकारी लिनेहरुको हुन्थ्यो। खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला कोरोनाको मापदण्ड, अस्पतालको खोजी, आइसीयूको खोजी, होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने, के औषधि खानेजस्ता विषयमा केन्द्रित रहे फोन गरे।
‘पछिल्लो समय भने कोरोनाका साथै विभिन्न स्वास्थ्य सेवाबारे सूचना लिनका लागि कल गर्छन्,’ डा अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि दैनिक ४÷५ सयको हाराहारीमा फोन आइरहेका छन्।’
अहिले विदेश जानेहरुले कोरोना खोपका बारेमा जानकारी लिन, खोप लगाएको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र कसरी लिने, विदेशबाट आउनेहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने–नपर्ने जस्ता विषयमा सोध्ने गरेका छन्।
कल सेन्टरमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न दुर्गम जिल्लाबाट पनि फोन आउने गरेका छन्। सेन्टरका कर्मचारी अनुसार पहाडी जिल्लाहरु कालिकोट, कैलाली, बझाङ, रोल्पा रुकुम, बाँके, बर्दियासहित अधिकांश जिल्लाबाट फोन आउने गरेको छ।
सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कल सेन्टरले कोरोनाबाहेकका अन्य महामारीका बारेमा पनि जानकारी दिने र समन्वय गर्ने गरेको छ। ‘कोरोनाको बिरामी भएको खण्डमा कुन जिल्लामा उपचार हुन्छ। कोभिडका बिरामीलाई कस्ता खालका सेवा सुविधा सरकारले दिन्छ? कोभिडका बिरामीलाई उपचार कसरी गराउने?बिरामीको नजिक कुन कोभिड अस्पताल पर्छ? कोभिड लागेमा कसरी सुरक्षित बस्न सकिन्छ?जस्ता सूचना कल सेन्टरमा दिइँदै आएको छ,’ अधिकारीले भने।
यस्तै, जिल्लाका बिरामीलाई नजिकको उपचार केन्द्रसम्म जानका लागि पनि कल सेन्टरले समन्वय गर्दै आएको छ।